Ilay soavaly Andalosiana na soavaly espaniola purebred: inona no tokony ho fantatrao | Soavaly Noti
Ny soavaly dia iray amin'ireo biby izay niaraka indrindra tamin'ny zanak'olombelona nandritra ny tantarany. Biby iray nivoatra niaraka tamin'ny olona, ​​nanatevin-daharana ny lalan'izy ireo ho iray. Betsaka ny karazana soavaly efa nisy sy nisy. Na izany aza, vitsy dia vitsy no nahavita lasa marika sy marika. Na izany aza, ny Soavaly Andalosiana afaka mirehareha amin'ny toe-javatra toy izany.
Soavaly Andalosiana, na Fomba espaniola madioAnisan'ny kolontsainay izy ireo izay nanaparitaka ny anaran'ny Espana indrindra eran'izao tontolo izao. Karazana ankafizin'izay rehetra tia fitoviana.
Amin'ity lahatsoratra ity dia nanolotra anao izahay hahafantatra bebe kokoa momba an'io biby io: ny fiaviany, ny toetrany, ny fiompiana, sns.
1 Fiandohan'ny soavaly Andalosiana
2 Toetra mampiavaka ny soavaly Andalosiana
4 Vidin'ny soavaly Andalosiana anio
Fiandohan'ny soavaly Andalosiana
Ahoana no hatao raha tsy izany, tany tsara tarehy sy tsara tarehy toa Andalusia Tsy maintsy io no toerana nahaterahan'ilay soavaly Andalosiana. Ny Moyen Orient sy Kalifazin'i Córdoba no anton-javatra nahavariana, niaraka tamin'ny andian'ny kilasy ambony tamin'izany fotoana izany (ireo mpanao heloka bevava lehibe indrindra).
Nihalehibe sy nalaza ny soavaly niavian'i Betic, ka hatramin'ny vanim-potoana teo anelanelan'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX, Voarara ny niampita ireo soavaly avy tany atsimon'ny Saikinosy Iberia niaraka tamin'ny ambiny. Mazava ny tanjona, ny mamorona tsipika iray hitazomana ny kalitaony rehetra ary hisongadina amin'ireo ambiny. Taty aoriana dia nanomboka nipoitra ireo mpiompy voalohany, ary nipoitra ny soavaly espaniola purebred.
Na izany aza, ny zava-drehetra dia tsy mety ho fandriana raozy, ary ny fitomboan'ny soavaly Andalosiana haingana dia notapahan'ny Adin'ny Fahaleovan-tena. Na dia nifarana aza ny fifandonana dia niverina indray ilay hetsika.
Tamin'ny faran'ny taonjato faha-1912, indrindra fa avy amin'ny sehatry ny tafika, ny soavaly Andalosiana dia navadika ho flagship, ary ny faniriana hanamafy an'io karazany io dia iray amin'ireo iraka lehibe nanirahana azy. Ary sambany tamin'ny taona XNUMX, ny boky voalohany dia nosokafana tany Espana mba hisoratra anarana soavaly purebred arabo, anglisy ary anglo-arabo, izay samy manana ny mampiavaka azy avokoa, toa ny Soavaly espaniola purebred (PRE).
Nandritra ny Repoblika faharoa dia tonga tany amin'ny minisiteran'ny fampandrosoana sy ny fambolena ny fampiroboroboana ny fiompiana soavaly. Ny asan'ny Federasiona Equestrian Espaniola dia tena zava-dehibe ihany koa.
Ny dingana voafaritra amin'ny fanamafisana ny karazany dia nitranga tamin'ny 1972 rehefa Niorina ny National Association of Spanish Horse Breeders (ANCEE) Amin'ny sevilla. Vokatr'izany dia maro ny foara sy hetsika niseho hitsangana sy hampiroborobo ireo soavaly ireo. Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, ny soavaly Andalosiana koa dia nifindra tany amin'ny kianja filalaovana izay nisy fisehoan-javatra marobe tamin'ireo hetsika malaza toa ny Lalao Olaimpika.
Toetra mampiavaka ny soavaly Andalosiana
Ara-batana, ny soavaly Andalosiana dia tsy iray amin'ireo mpitaingira lehibe indrindra. Inona koa, azo lazaina fa ny habeny dia amin'ny refy antonony. Ny haavony dia tafiditra ao anaty laharam-pahamehana eo anelanelan'ny 155 santimetatra ka hatramin'ny 175 santimetatra.
Izy io dia manana vatana tena mifandanja, misy loha antonony, izay ny manaitra indrindra dia ny masony feno fifaliana sy maneho hevitra lehibe. Tena malalaka sy hozatra ny tratra, misy lamosina matanjaka, misy lamosina fohy sy malalaka. Lava sy mahery ny ranjony. Azo antoka, Soavaly Andalosiana dia mailaka sy matanjaka, ary koa kanto sy tsara tarehy.
Ny aloky ny palitao dia samy hafa. Raha ny tena izy dia manana toerana saika ny loko rehetra ity karazana ity, ankoatry ny pio. Na izany aza, loko mainty no mitarika, ny ny loko volondavenona malaza indrindra.
Raha ny toetra amam-panahy dia mety ho io no marika mampiavaka anao indrindra. Soavaly mora entina sy mendri-kaja ary manan-tsaina izy ireo, izay mahatonga azy ireo ho mora volavolaina indrindra raha karakaraina tsara izy ireo. Angamba io koa no nahatonga ilay biby lasa biby marobe tokoa.
Soavaly be mpampiasa amin'ny mitaingina azy sy toy ny soavaly mitaingina azy. Ho fanampin'izany, malaza be eo amin'ireo taranja fitafiana, fitafiana koboy ary zavakanto nentim-paharazana toy ny rejoneo.
Any Espana no tena fanabeazana azy ireo, fa misy ihany koa ny omby sy ny tranon'omby manana ny lanjany lehibe amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao.
Ny fomba itaizana ireo biby ireo dia nahasarika fifantohana betsaka, satria matetika izy io no manao fomba iray amin'ny fahalalahana semi izay iainana mares amin'ny omby. Aorian'ny nahaterahany dia misy amboadia amidy fotoana fohy aorian'izay, ary ny hafa kosa mijanona ao anaty andiany mandra-pahatongan'ny telo ka hatramin'ny efa-taona, izay atokany mba ho voafolaka.
Vidin'ny soavaly Andalosiana anio
Toy ny mahazatra, ny fanomezana lanja soavaly dia miankina amin'ny lafin-javatra maro: taona, karazany, firaisana, sns. Na izany aza, azo lazaina fa amin'ny ankapobeny, ny sandan'ny soavaly espaniola Andalosiana na Purebred dia hita eo anelanelan'ny 4000 sy 6000 euro, satria karazany manan-danja tokoa izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » Soavaly Andalosiana